Buford's amaireca — Steemit
goldbloger6 (35)in #artzone •3years ago
သို့သော်သူကမထိန်းချုပ်နိုင်မယ့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာမီးပိတ်ထား setting အန္တရာယ်များ။ နှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများ Trump တောမှအခွင့်အလမ်းလွဲချော်ကြပါလိမ့်မယ်တဲ့ရလဒ်ဆီသို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် inexorable ယုတ္တိဗေဒအတိုင်းလိုက်နာအဖြစ်လည်းကောင်း
ပြည်ထောင်စု disentangle ဖို့ကြိုးစားမယ့်စစ်ပွဲအတွင်းထပ်မံပါဝင်ပတ်သက်မှုအန္တရာယ်များ။ သူ၏ကိုယ်ပိုင်ရှေ့နေတစ်ဦးကို FBI ဝင်ရောက်စီးနင်း၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့မိုက်ကယ် Cohen ကို, Trump လည်းအဆုံးအဖြတ်
များ၏ကြင်နာဖြစ်ခြင်းများနှင့်ကြာရှည်ခံတယ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချအကြားစစ်မက် Impulses သတင်းပို့ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဆီးရီးယား၌, Trump တစ်ဦးသံသယဓာတုတိုက်ခိုက်မှုဘာရှာအယ်လ်အာဆတ်၏စစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့မာန်စစ်ရေးတုံ့ပြန်မှုလိုအပ်တစ်အနီရောင်လိုင်းဖြတ်သန်းသွားသည်ကြောင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။
သမိုင်းပညာရှင်သူတို့အကျပ်အတည်းကာလ၌တုံ့ပြန်ဘယ်လိုနေဖြင့်သမ္မတစစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်း, ဝါရှင်တန်ရှိတစ်ဦး unseasonably အအေးဧပြီလအတွင်း Trump နှစ်ခုအဓိကသူတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်: တစ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာဓါတုဆီးရီးယားအတွက်သပိတ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သည်သူ၏အတွင်းစိတ်စက်ဝိုင်းသို့ရောက်ရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးအကြောင်းကိုလုပ်ဖို့တုံ့ပြန်ရန်မည်သို့မည်ပုံ။ နှင့်ရက်စက်စွာအနုတ်လက္ခဏာ - - မိမိသမ္မတအကျိုးဆက်များနှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင် Trump သူကဲ့သို့မိမိကိုမိမိဖော်ကျူးဖို့ likes အဆုံးအဖြတ်ခေါင်းဆောင်
အရေးယူမှုတစ်ခု option ကိုရှိပါတယ်: အထူးအကွံဉာဏျရောဘတ် Mueller ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားမှုအတွက်ရှေ့နေချုပ်က Jeff Sessions သို့မဟုတ်ဒုတိယရှေ့နေချုပ်လှံတံ Rosenstein ပစ်ခတ်။
အမှု၌မလှုပ်မရှား, နည်းတူအဓိပ္ပါယ်ရှိသောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဓာတုတိုက်ခိုက်မှုကနေမွန်းကျပ်သားသမီးများ၏ရုပ်ပုံများကိုရုပ်မြင်သံကြားသတင်းရှိုးရေလွှမ်းပေမယ့်မဆိုသပိတ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြီးသားပျက်စီးလွယ်ခွအေနကေို upending အန္တာရာယ်နှင့်နောက်ထပ်သမ္မတထဲကရဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့ပဋိပက္ခအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရွံ့နိုင်ပြီးနောက် Trump မာန်အရေးယူမှုကတိပြုခဲ့သည်။ ထိုအခါ FBI ကဝင်ရောက်စီးနင်းခံကသူ၏ရှေ့နေရဲ့ရုံးနှင့်ဟိုတယ်အခန်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရှက်တုံ့ပြန်ဖို့ဘယ်လိုရှိတယ်။ Trump သူ Cohen ကိုဆန့်ကျင်ထူးခြားသောစုံစမ်းရွေ့လျားဆန့်ကျင်ကာ unprompted diatribe နဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအဖွဲ့နှင့်အတူဆီးရီးယားအပေါ်တစ်ဦးဝေဖန်အစည်းအဝေးကိုတနင်္လာနေ့နှောင်းပိုင်းက
သူ၏သက်တမ်းကြာဥပဒေရေးရာ fixer ဖွင့်လှစ်အဖြစ်ပြဿနာများကိုခွဲခြားရန်မကြိုးစားခဲ့ပါဘူး။ "ဒါကြောင့်ပဲသူတို့သည်ငါ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှေ့နေများတစျဦး၏ရုံးခန်းသို့ချိုးဖဲ့ကွောငျးကိုကွား," Trump သတင်းထောက်တွေကိုအခန်းထဲသို့ပို့ဆောငျခဲ့ကြပြီးနောက်, unprompted ကဆိုသည်။ "ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ဆီးရီးယားအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်ကျနော်တို့အလေးအနက်အမှုအရာတွေအများကြီးအကြောင်းပြောနေတာဖွင့် - ငါတို့သည်အစဉ်အဆက်အကြီးမြတ်ဆုံးတိုက်ပွဲတွေအင်အားသုံးနေ - ။ ငါအဆက်မပြတ်ပေါ်မယ့်ဒီစုန်းမအမဲလိုက်ခြင်းများ" Trump "ငါတို့တိုင်းပြည်တခုတခုအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှု။
" "အရှက်" Cohen ကိုရဲ့ရုံးနှင့်ဟိုတယ်အခန်း၏ရှာဖွေမှုများကိုခေါ်သူက "ဒီမိုကရက်" သူ့ကိုပစ်မှတ်ထားများအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပေါ်အလုပ်မလုပ်အပြစ်တင်နှင့်တာဝန်ရှိသူများဟုဝါးတားဂိတ်စဉ်အတွင်းနိုင်ငံရေးအာဏာကိုသမ္မတနစ်ဆင်ရဲ့အလွဲသုံးစားမှုတစ်ခုပဲ့တင်သံကြီးပြင်း FBI ကကျွမ်းကျင်သူများကနိမိတ်လက္ခဏာကို-off ၏မျိုးစုံအဆင့်ဆင့်လိုအပ်လိမ့်မယ်ဟုပြောရာတရားရုံး-အမိန့်ရှာဖွေရေးရမ်း, တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော်လည်း, သူ့ရှေ့နေများကရုံး "သို့ချိုးဖဲ့" ။ Trump Cohen ကိုဆန့်ကျင်ရှာဖွေရေးအမိန့်နယူးယောက်၏တောင်ပိုင်းခရိုင်နှင့်အထူးမဟုတ်အကွံဉာဏျရောဘတ် Mueller များအတွက် Trump-ခန့်အပ်ထားသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေတစ်ဦးထံမှလာသည်ဟုအချက်ကိုကျော်အစည်းအဝေးများတွင်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, Trump ရဲ့ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့ကရှာဖွေမှုများကိုရုရှားအာကာသယာဉ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် Cohen ကိုဖိအားပေးဖို့ Mueller အသုံးပြုသောနိုင်ယုံကြည်သည်။ သူ Mueller ပစ်ခတ်မယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာမေးသော်, Trump replied: "အဘယ်ကြောင့်ငါပဲ Mueller ပစ်ခတ်ကြသည်မဟုတ်လော ကောင်းပြီ, ငါကအပေါ်သွားပြီရဲ့အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးအရှက်ကွဲမယ့်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ " အများစုမှာဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူများ Trump တိုက်ရိုက် Mueller ပစ်ခတ်မဟုတ်နိုင်ပြီး, အစား Mueller ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ပိုင်ခွင့်ခဲ့သူပထမဦးဆုံးမီး Rosenstein, ရန်ရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်အမှုပိတ်ပစ်ရန်ဆန္ဒရှိတစ်ခုရှေ့နေချုပ်နှင့်အတူမိမိကိုမိမိ recused ခဲ့သူ Sessions အစားထိုးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ Trump မကြာခဏဒီစာအုပ်ကိုအထင်သေးခြင်းနှင့်နုတ်ထွက်ယခင် Alabama အဘိဓါန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်သိသာသောအားထုတ်မှုအတွက် Sessions berated သိရသည်။ Trump သူ Mueller စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကြီးကြပ်ထံမှကိုယ်တော်တိုင် recuse မယ်လို့သိတယ်လျှင်သူသည်အလုပ်အကိုင်အဖို့ Sessions အမည်ရှိမဟုတ်ဘူးတနင်္လာနေ့ကပြောပါတယ်။ သို့သော် Sessions အလုပ်မှမှီဝဲနဲ့ Hard-line ကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒများပြဋ္ဌာန်းခြင်းနှင့်သမ္မတအိုဘားမားခေတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုအစီအစဉ်များကိုပြန်ချွတ်ပြီးနေဖြင့်ရှေ့ဆက် Trump ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကတိတော်များအများအပြားတွန်းလိုက်ပါတယ်။ မိမိကိုမိမိနှင့်သူ၏ရှေ့နေများ၏ Trump ကာကွယ်ရေးနီးပါး Trump သူဒမတ်စကတ်မြို့အနီးဘာရှာအယ်လ်အာဆတ်၏အစိုးရဖြင့်ဓာတုတိုက်ခိုက်မှုတုံ့ပြန်ရန်မည်သို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရန်နီးစပ်ခဲ့ဟုသတင်းထွက်ရေနစ်။ "ဒါဟာတွေ့ဆုံခဲ့ကြလိမ့်မည်, ထိုသို့အခိုငျအမာတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်" ဟု Trump ကဆိုသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမဟာမိတ်သမ္မတအာဆတ်၏အစိုးရကျောထောက်နောက်ခံအားဖြင့်အာဏာနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပရောဂျက်အီရန်နှင့်ရုရှားနိုင်ငံတို့ကကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုတန်ပြန်ရန် jockey အဖြစ်ဆီးရီးယားတွင်မဆိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရေးယူမှု, ဒေသတွင်းအပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီအပေါငျးတို့သအပွောငျးအလဲသမ္မတအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတည်ငြိမ်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ကြသူ Trump န်ထမ်းများ၏သော့ချက်ထွက်ခွာ၏ပါတီအားဖြစ်ပျက်နေသည်။ Trump ရဲ့သက်တမ်းကြာဆက်သွယ်ရေးလက်ထောက်မျှော်လင့် Hicks ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအိမ်ဖြူတော်ထားခဲ့တယ်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် H.R. McMaster အဆိုပါ U.N. ယောဟန်သည်ဘော်လ်တန်အနေနဲ့အတွေ့အကြုံရှိဗျူရိုကရေစီဓါးတိုက်လေယာဉ်များနှင့်ကြာမြင့်စွာအချိန်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ Hawk ဟောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသံအမတ်ကြီးများကတနင်္လာနေ့ကိုအစားထိုးခဲ့သည်။ Trump မကြာသေးခင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းပိုပြီးခက်ခဲတဲ့လုပ်ရပ်များယူလိုသောတရုတ်ဆန့်ကျင်အခွန်၏ခြိမ်းခြောက်မှုများတက် ratcheting, မေလအတွက်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်မ်ဂျုံအန်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်သဘောတူသဖြင့်သူ့လှံတံ surprising, သူ့ကို mo ပေးဖို့ဥပဒေပြုအမတ်များကိုနှိပ်လက္ခဏာပြသလိုက်ပါတယ်
saminepanyarshin suuthoet aakyautaataee karl tonepyan bhaallo nay hpyint sammat hcaitkyaww hcerain taw muu hkyinn, warshintaan shi tait u unseasonably aaaayyepyelaaatwin Trump nhaithku aadhik suutwayko rainsinenayr tar hpyitpartaal: tait raathcaat kyam kyuat hcwar dhartu seereeyarr aatwat sapate nhangabhaalshoet sine saisuueat aatwinhcate hcaatwine shoetroutshi hconehcamhcaitsayy aakyaunggko lotehphoet tonepyan raan maishoetmaipone . nhaint raathcaathcwar aanotelakhkanar - - mimi sammat aakyoesaatmyarr nhait u hc lone kihchcamyarrtwin Trump suu kaeshoet mimi ko mimi hpawkyauuhphoet likes aasoneaahpyat hkaunggsaungmyarreat kyinnar hpyithkyinn myarr nhaint kyaarshi hkan taal tae sonehpyathkyet m hkyaakyarrhcaitmaat Impulses satainnphoet rainsinenayr sai . seereeyarr , Trump tait u sansay dhartu titehkitemhu bhar shar aaall aarsaat eat hcaitaahcoerako s ant kyin nay tae maran hcaitrayy tonepyanmhu loaaut tait aaneraung line hpyatsaann swarrsai kyaungg sonehpyat ninebhuu . darpaymae suu laee shuko pyeehkae saeet aapaatk k nayaamayrikaanpyihtaunghcu disentangle hphoet kyaoehcarr m ae hcaitpwal aatwin htautman parwain paatsaatmhu aantararalmyarr . suueat kopine shaenay tait uko FBI wainrouthceenainn eat hpyitraut mhartotmitekaal Cohen ko, Trump laee aasoneaahpyat aarayyyuumhutaithku option ko shipartaal: aahtuuakwan nyar nyarawbhaat Mueller rae hconehcamhcaitsayy mhuko aasonesaathphoet kyaoehcarrmhu aatwat shaenayhkyaotek Jeff Sessions shoetmahote dutiy shaenayhkyaote lhaantan Rosenstein paithkaat . shoetsaw suu k m hteinhkyaote nine m ae hpwalhcaeeponeaahkyayhkanupaday sinerar meepatehtarr setting aantararalmyarr . nhait u hc loneaahkyayaanaymyarr Trump taw mhaahkwinalam lwalhkyaw kya par lain maal tae ralad seshoet mimithoetkopine inexorable yuttibayd aatine litenar aahpyit laeekaunggamhu malhuut m sharr, naeetuu aadhipparalshisaw hpyitninepartaal . dhartu titehkitemhu k nay mwann kyaut sarrsamee myarreat roteponemyarr ko rotemyinsankyarr satainn shoe raylwham paymaae m so sapate aashaeaalaalpine mharshitae pyeesarr pyethcee lwal hkw aay n kayo upending aan tar raral nhaint nouthtaut sammat htellk rahphoet myahaaw laint nay tae patipakhk aatwin aamayrikaanpyihtaunghcu rwan ninepyeenout Trump maran aarayyyuumhu k ti pyuhkaesai . htoaahkar FBI k wainrouthceenainn hkan k suueat shaenay rae rone nhaint hotaal aahkaann eat puggolrayy aashat tonepyanhphoet bhaallo shitaal . Trump suu Cohen ko s ant kyin htuuhkyarrsaw hconehcam rwaelyarr s ant kyinkar unprompted diatribe nae shurae ninengantaw lonehkyuanrayy aahpwal nhaint aatuu seereeyarraapaw tait u wayhpaan aahcaeeaawayyko tanainlarnae nhaawinnpine k suueat saattam kyaarupadayrayyrar fixer hpw int lhait aahpyit pyaဿnarmyarrko hkwalhkyarr raan m kyaoehcarr hkaeparbhuu . " dar kyount pell suuthoetsai ngareat puggolrayy shaenaymyarr t hcya u eat ronehkaann shoet hkyoe hpae kwayarngya ko kwarr," Trump satainnhtouttwayko aahkaann htellshoet phoet sawngya hkae kya pyeenout, unprompted k sosai . " denayrarmhar kyanawthoet seereeyarr aakyaungg pyawwnaytar naykyasai kyanawthoet aalayyaanaatamhuarar twayaamyarrkyee aakyaungg pyawwnaytar hpwin - ngarthoetsaiahcainasaatakyee myat sone titepwaltway aainaarrsonenay - . ngar aasaatmapyat paw m ae de hcone m aamelllitehkyinn myarr" Trump " ngarthoet tinepyi tahku tahku aapawmhar titehkitemhu . " " aashat" Cohen ko rae rone nhaint hotaal aahkaann eat sharhpwaymhu myarrko hkaw suuk " demokaraat" shuko paitmhaathtarr myarraatwat hconehcamhcaitsayy mhu aapawalotemalote aapyittain nhaint tarwaanshisuumyarr hu warr tarr gate hcainaatwin ninenganrayy aarnar ko sammat nait sain rae aalwalsonehcarrmhu taithku paetainsan kyeepyinn FBI k kyawmkyinsuumyarrk nimate lakhkanar ko-off eat myoehcone aasaint saint loaaut lain maal hu pyaww rar tararrrone-amein sharhpwayrayy ram, tarwaanhtamsaung hkaesawlaee, shu shaenaymyarr karone " shoet hkyoe hpae" . Trump Cohen ko s ant kyin sharhpwayrayyamein nayuu youteat taungpinehkarine nhaint aahtuu mahoteakwan nyar nyarawbhaat Mueller myarraatwat Trump- hkaant aaut htarrsaw aamayrikaanpyihtaunghcu shaenay tait u htanmha lar saihu aahkyetko kyaw aahcaeeaawayymyarrtwin . maishoetpain so hcay, Trump rae upadayrayyrar aahpwal k sharhpwaymhu myarrko rusharr aarkars yarinpuupaunggsaungrwatraan Cohen kohpiaarrpayyhphoet Mueller aasonepyusaw nine yonekyisai . suu Mueller paithkaat maalsorain noutpinemhar mayy saw, Trump replied: "abhaal kyawwng ngarpell Mueller paithkaat kyasai mahotelaw kaunggpye, ngar k aapaw swarrpye raeabhaalaarar ko tait u aashat kwal m ae lhoet htainpartaal . kyanawthoet hpyitpyet ko myinr par lain maal . " aamyarrhcumhar upadayrayyrarkyawmkyinsuumyarr Trump titerite Mueller paithkaat mahote ninepyee, aahcarr Mueller rae hconehcamhcaitsayy mhu lote pine hkwin hkaesuu pahtam u sonemee Rosenstein, raan shisai, darmhamahoteamhu patepait raan sandashi taithku shaenayhkyaote nhaint aatuu mimi komimi recused hkaesuu Sessions aahcarrhtoe maallhoet yonekyipartaal . Trump makyaarhkan dehcaraotekoahtain sayy hkyinn nhaint notehtwatyahkain Alabama aabhidharan aahtaatlwhaattawaamaat hcaeerone saimswin raan sisar saw aarrhtotemhuaatwat Sessions berated sirasai . Trump suu Mueller hconehcamhcaitsayy mhu kyeekyaut htanmhakotawtine recuse maallhoet sitaal shin suu sai aaloteaakine aahphoet Sessions aamaishi mahotebhuu tanainlarnae k pyawwpartaal . shoetsaw Sessions aalotemha mhae wellnae Hard-line ko luuwainmhukyeekyautrayy muuwardamyarr pyathtarann hkyinn nhaint sammataaobharrmarr hkayat pyitmhusinerar tararrmyahatamhu aahceaahcainmyarr ko pyan hkyawatpyee nay hpyintshaesaat Trump rae mellswalhcaeeronerayy k ti tawmyarr aamyarraapyarr twann litepartaal . mimi ko mimi nhaint suueat shaenaymyarreat Trump karkwalrayyneeparr Trump suudmaat hc kaat myahoet aanee bhar shar aaall aarsaat eat aahcoer hpyang dhartu titehkitemhu tonepyan raan maishoet sonehpyathkyet m hkyaraan neehcaut hkae hu satainnhtwat raynait . " darhar twaesonehkae kya lain mai, htoshoetahkongyaamar twaesonehkae hkyinnko hkanr lain maal" hu Trump k sosai . aamayrikaanpyihtaunghcu maharmate sammat aarsaat eat aahcoer kyawwhtoutnouthkan aarr hpyint aarnar nhaint sya jar lwhammoemhu parawgyet aeraan nhaint rusharrninengan thoet k kyaoepam aarrhtotemhu myarrko taanpyanraan jockey aahpyit seereeyarr twin m so aamayrikaanpyihtaunghcu aarayyyuumhu, daysatwin aapaw sisisarsar aakyoesaatroutmhu myarrshi par lain maal . deapawngya thoet s aapwayarngyaaalell sammataaapaw sya jar lwhammoemhu taingyaain aahpyit shumyin hkae kyasuu Trump n htam myarreat sothkyet htwathkwar eat parteaarr hpyitpyet naysai . Trump rae saattam kyaar saatswalrayy laathtout myahaawlaint Hicks pyeehkae saeet aapaatk aainhpyauutaw htarrhkaetaal . aamyoesarrlonehkyuanrayyaakyaanpayypuggol H.R. McMaster aasopar U.N. yawhaan sai bhawltaan aanaynae aatwaeaakyuan shi byauu ro karay hce dharr titelayyarin myarr nhaint kyaar myint hcwar aahkyane ninenganhkyarrrayymuuward Hawk haungg aamayrikaanpyihtaunghcu sanaamaatkyee myarr k tanainlarnae ko aahcarrhtoe hkaesai . Trump makyaarsayyhkain raatsattapaat aanaeengaal aatwin popyee hkaathkelltae loterautmyarr yuu losaw tarote s ant kyin aahkwan eat hkyaaimhkyawwatmhumyarrtaat ratcheting, may l aatwat myawwatkoreeyarrhkaunggsaung kainm gyaone aaann nhaint twaesoneraan sabhawtuu s hpyint shu lhaantan surprising, shuko mo payyhphoet upadaypyu aamaatmyarr ko nhaiut lakhkanar pya s litepartaal
#wafrica #esteem #good-karma #life
3 years ago in #artzone by goldbloger6 (35)